Vatsigiri vaVaTrump vakarwisa muzinda weCapitol Hill musi wa 06 Ndira
Vaimbove vashandi vaiona nezvekudzivirirwa kweparamende muAmerica, yeU.S. Capitol neChipiri vakapa humbowo kekutanga kubva pakarwiswa muzinda uyu musi wa 06 Ndira nevanhu vairatidzira.
VaRume vekupa humbowo ava vaipomera mhosva pakusavepo kweruzivo rwakakwana nezvekurwiswa uku sechikonzero chikuru chakaita kuti vakundikane kumisa kurwiswa uku, uko vakati kwakanga kusingatarisirwe, uye kwakanga kwakarongwa nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika, VaDonald Trump.
Vaimbove vashandi ava, avo vanoti vaive mukuru wemapurisa e U.S. Capitol, VaSteven Sund, vaive mukuru wezvekuchengetedzwa kwemutemo mudare repasi, kana kuti Sergeant-at-Arms, VaPaul Irving pamwe nemukuru aiona nezvekuchengetedzwa kwemutemo mudare reseneti, VaMichael Stenger, vakamira pamberi pemakomiti eseneti maviri anoti inoona nezvemukati menyika, kana kuti Senate Committee on Homeland Security neyemitemo nekufambiswa kwemabasa, yeRules and Administration.
Aka ndekekutanga mumatanho anotarisirwa kutorwa mukuferefeta chakatadzisa kudzivirirwa kwekurwiswa uku.
Vatatu ava vose vakabva vasiya basa zvichitevera kurwiswa uku, uko kwakasiya vanhu vashanu vafa, kusanganisira mupurisa, uye mamwe mapurisa zana nemakumi mana akakuwadzwa.
Chizvarwa cheZimbabwe, uye vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America, VaTawanda Dzvokora, vanoti zvaitwa nedare reseneti ndizvo chaizvopo zvinofanirwa kuitwa nehurumende inoteeddzera mutemo, hurumende inotungamidza zvido zvevanhu vayo mberi.